Ataovy izany | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Ataovy izany
Ny rafitra fanamafisana ny ririnina amin'ny ririnina dia manao izany
Rehefa manomboka ny andro mangatsiaka dia miaro antsika ny fiarovana ny efitrano. Ary satria ny faktioran-tsolika dia mitombo hatrany, dia mihabetsaka hatrany ny olona mitodika amin'ny olana momba ny fisian'ny fiarovan-tena. Ny ampahany betsaka amin'ny fahavoan'ny hafanana dia mianjera eo amin'ny varavarankely ary afaka miovaova ny 1/3 hatramin'ny 1/2. Io olana io dia tsy ny tompon'ireo varavarankely efa tranainy, fa ny plastika ihany koa.
Ny endriky ny dingan'ny tapatapakaka misy karazan-tsavony: ny vahaolana amin'ny olana mifandraika
Wallpapers - ny takaitra malaza indrindra amin'ny rindrina sy ny tafo. Ny vidiny ambany, ny safidy malalaka amin'ny loko, ny famerenana haingana sy ny fiarovana dia mamaritra ny angatahana lehibe ho azy ireo. Ny fanontaniana tokana dia ny fizotran'ny lakaoly. Ahoana ny fomba hanaovana izany marina - hiresaka momba izany bebe kokoa isika. Fanomanana ny rindrina Ny fanombohana voalohany dia ny fanomanana ny rindrina.
Fanorenana ny birao ho an'ny Taombaovao
Ny akaiky kokoa ny fankalazana ny Taombaovao, ny karazana famantarana rehetra, ny garlandana mamirapiratra sy ny endriny isan-karazany dia hita eny an-dalambe. Ity sarin'ny pre-krismasy ity dia tsy afaka manentana afa-tsy ny fanorenana ny toeram-piasany. Ankoatra izany, mahafinaritra kokoa ny miasa raha tsy ny fitondrana ofisialy ihany no manjaka, fa misy ihany koa ny kely, fa ny fampahatsiahivana mandritra ny fetin'ny fankalazana ho avy.
Ny fomba fanasarahana ny varavarana: metaly (vy) ary hazo
Maro ireo lehilahy izay tia manao ny zavatra rehetra amin'ny tanany, nefa tsy manintona azy ireo. Ho azy ireo, tsy misy olana sy ny pokleit, pokleit, ary mametraka laminasa. Ary ahoana ny momba ny varavarana? Mihevitra isika fa azo atao izany, ary te hizara amin'izy ireo torohevitra sarobidy isika, amin'ny filazana ny fomba handrefesana tsara ny varavarana - vy na hazo, ary hanazava ny fiantraikan'ny fitaovana isan-karazany amin'ny fako.
Ny fanaovana sofa iray avy amin'ny palettes dia ataovy izany
Indraindray ny zavatra mahagaga amin'ny fiaviany. Mety ho azo atao amin'ny alàlan'ny palettes, izay matetika tsy ilaina akory na eny an-tserasera aza. Hitanao fa azo ampiasaina sy ilaina ho an'ny ankohonana ireo pallets ampiasaina. Azonao atao ny manamboatra fitaovana mahagaga avy amin'ireny vato sokay ireny.
Ahoana ny famelana ny valindrihana
Ny fandroana no singa fototra indrindra amin'ny asa rehetra vita ary fomba tsara indrindra hanavaozana ny efitrano. Na izany aza, ity karazana fitsaboana ity ankehitriny dia tsy ampiasaina amin'ny fomba mahazatra. Rehefa nanapa-kevitra ny hanavao ny tranonao ianao, dia nandrehitra ny valindrihana, zava-dehibe ny hahafantarana ny fomba hanaovana izany araka ny tokony ho izy. Amin'izao andro izao dia hiteny aminareo izahay hoe inona ny fomba fanalefahana sy ny fomba hanamboarana haingana sy haingana amin'ny tenanao manokana.
Ahoana ny fomba hikorianana tsara ny kofehy amin'ny seramika sy kofehy
Ny fametrahana tapa-kazo - dia zava-manahirana, ka matetika izy ireo no tompon'ny fahatokiana. Nefa ankoatry ny kilaoty dia, misy koa ny teboka eo anelanelan'ireo sombintsombiny, izay mitaky ny fanitsiana. Ary amin'izao fotoana izao dia azo atao ny manao izany amin'ny tenanao manokana, izay ahafahanao mahita ny tenanao ankehitriny. Ny safidin'ny fako Mba ho fitondran-tena amin'ny fampifangaroana ireo karazana, dia: Amin'ny fototra simenitra.
Fametrahana tsy miankina ny siny ao amin'ny tableta
Raha vao jerena dia toa tsy misy sarotra mihitsy ny fametrahana sodina: nampihatra ny loaka nilaina teo amin'ny latabatra izy, nanapaka izany, nampiditra ilay sodika, nampifandraisina tamin'ny rindrina sy ny fantson-drano, ary izany rehetra izany - azonao ampiasaina. Raha ny marina, ny tena fomba marina, afa-tsy ny "afa-tsy" ihany.
Ny fametrahana tsy miankina ny ety ivelany misy hafanana eo ambanin'ny laminate, linoleum ary kilaometatra iray
Ny trano fonenana amin'izao fotoana izao dia tsy mahavariana intsony, fa ilaina: ity vahaolana ity dia ahafahanao mifehy ny toetr'andro ao an-trano ary mameno ny herinaratra mandritra ny fotoana fanasitranana. Ho an'ny tombontsoa, ​​ary koa ny karazana sy fitsipika momba ny fametrahana ny fanambanin'ny fanambanin'ny dobo dia hodinihina amin'ny antsipiriany bebe kokoa. Ny tombony amin'ny trano mafana Ny rafitra mafana dia tsy vaovao: 5 000 taona lasa izay, ny fomba amam-panaovana fampakaram-bady dia nampiasaina tamin'ny fandroana Tiorka sy Ejiptiana.
Ahoana no fomba hametrahana ambadiky ny varavarankia
Amin'ny ankapobeny, ny fametrahana ny sisin'ny varavarankely, ny plastika plastika ary ny tondra-drano dia miseho avy hatrany aorian'ny fametrahana ny varavarankely. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, izany dia ataon'ny ekipa mpanorina amin'ny sehatra metaly-plastika. Saingy misy ireo tranga izay ilàna ny fametrahana ny varavarankelin'ny varavarankely amin'ny tananao, ary ny fomba hanaovana azy tsara, dia hodinihintsika ao amin'ny lahatsoratra.
Ahoana ny fametrahana tora-patana eny amin'ny gorodona sy eny amin'ny rindrina ao amin'ny efitra fandroana
Amin'ny fotoana anaovana fanamboarana trano na trano, ny fametrahana ravina anaty fandroana dia heverina ho asa tena sarotra, ka ny ankamaroan'ny olona dia mandidy an'io asa io ho an'ireo matianina. Saingy tsy ny zava-drehetra dia sarotra toy ny hita eo amin'ny voalohany, ary ny fametrahana tsora-kazo dia azo atao manokana, ary mba hanao ny zava-drehetra haingana sy azo atao araka izay tratra, dia manolotra torolalana amin'ny antsipiriany isika ary mandinika ireo loha-hevitra lehibe indrindra amin'ity dingana ity.
Asa tanana maro avy amin'ny kibay no manao izany
Angamba, tsy misy olona tsy niezaka nanao asa tanana na firavaka amin'ny tanany manokana. Saingy ho an'ny sasany dia fahatsiarovana fotsiny ny fahazazana izany, fa ny maro dia tsy mamela ity asa ity na dia amin'ny olon-dehibe aza. Ankoatr'izany, ny natiora matetika dia manome antsika ny fitaovana ilaina rehetra. Ary ny tena malaza amin'izy ireo dia mazava ho azy.
Ny fomba hanamboarana hazo iray
Raha te hahatratra ny toeran'ny maha-tiana anao sy ny maha-adala anao amin'ireo hazo ao amin'ny efitranonao ianao, dia tsy maintsy mamelona azy ireo fotsiny ianao. Ary manao izany mora ao an-trano, amin'ny fisafidianana ny fomba tsara indrindra. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fomba nentim-paharazana momba ny fahantrana amin'ny artificial sy ny teknika. Fa maninona no mitombo ny hazo efa tranainy, fa ny trano anatiny dia mahafinaritra kokoa ny hazo izay manimba ny vanim-potoana.
Ahoana no hanaovana dobo iray eo amin'ilay toerana
Ny tonta manokana ao amin'ny teti-bolao dia tsy iray amin'ireo fomba hananganana rivo-piainana mahasalama sy mahaleotena ao amin'ny firenena, fa koa ny fahafahana manampy tsiro manokana ho an'ny fanorenana ny tontolo iainana. Heverinao ve fa tsy mihoatra ny herinao ny rafitra hydraulika toy izany? Diso ianareo, hilaza aminay ny fomba fametrahana ny fametrahana ny dobo iray amin'ny tananareo manokana, mandany vola kely sy ezaka kely indrindra.
Manamboara endrika vita amin'ny vatofokely avy amin'ny fitaovana isan-karazany
Asfalt mittsom-baratra miaraka amin'ny ranon'izy ireo amin'ny orana sy ny rotsak'andro mahatsiravina amin'ny hafanana amin'ny lasa. Izy ireo dia nosoloina lalam-pasika madio sy madio ary tsara tarehy, voarakotra amin'ny karazana sy loko isan-karazany. Ny andian-doko maingoka dia maneho ny fahasarotan'ny zava-manahirana tanteraka amin'ny fizotran'ny famoronana sehatra famoronana toy izany.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ataovy izany